Visitor is reading देशको लागि छोराको माया मार्न नसकेका ज्ञानेन्द्रले, बुहारीको
Visitor is reading Is high speed computer trading killing investing?
Visitor is reading Event: New Year Eve - Queens, NY
Posted on 10-15-18 8:30 AM Reply [Subscribe]
अघिल्लो हप्ताको शुक्रवार स्पेसल भिडियो फेरि रिभिजिट गर्दै थिएँ ।
-- ज्ञानेन्द्रले राजा हुँदा नै अहिले जस्तै छोरालाइ छोड्न सकेको भए त .. राजतन्त्र बच्थ्यो होला है ?
सन २००१ मा ज्ञानन्द्र ले राजा बन्ने बित्तिकै पारसलाइ युवराजधिराज नियुक्त गरेका थिएनन ।
- मानिसहरुले बिरोध गर्छन भन्ने उनलाइ थाह थियो ।
- तर, दशैंकै बेलामा - दशैं छुट्टिमा स्कुल कलेज बन्द हुने मौका छोपेर
- बिरोध गर्ने बिध्यार्थिहरु रमाइलो गरिरहेका हुन्छन भनेर - दशैंको बेलामा युवराज नियुक्त गरेका थिए।
अहिले "बुहारिको खुशिको लागि" छोराको त्याग गर्न सक्ने पुर्वराजाले
त्यो बेला जनताको खुशिको लागि किन त्याग गर्न नसकेका होलान ?
(यो बारेमा भिडियो रिपोर्ट अघिल्लो हप्ताको शुक्रवार बनाएको थिएँ - त्यसलाइ मेटेर ज्ञानेन्द्रको अन्तरवार्ताको एउटा छोटो क्लिप थपेर अपलोड गरिसकेपछि .. भिडियो त फेरि incomplete भयो जस्तो लाग्यो । साझाकाले के भन्छन भनेर सोध्न मन लागेको) ..
अपडेट -> अनि यस्तो कमेन्ट आएको रहेछ
"जनताको लागि भनेर एकैचोटिमा आँफ्नो पुर्खौलि राज गद्दि सम्म त्यग्ने माहन राजा ज्ञानेन्द्र । तेस्ता राजनलाइ आँफ्नो कपुत छोरो त्यन कुनै ठुलो कुरा होइन ! अझै पनि भन्छु राजा आउ देश बचाउ! हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राण भन्दा प्यारो छ। जय नेपाल"
Last edited: 15-Oct-18 08:36 AM